Basabisa ngokuvala uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi | News24
Basabisa ngokuvala uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi
Kungesikhathi izinhlangano zibhikisha ngoLwesine olwedlule.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
IZINHLANGANO ezingenzi nzuzo zaseMgungundlovu sezisabise ngokuthi zizovala zonke izikhungo zoMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi eMgungundlovu uma ngabe izikhalo zabo azibhekwa.
Le zinhlangano zibhikishe ngaphandle kwamahhovisi alo mnyango aku-Hoosen Haffejee ngoLwesine olwedlule nalapho kade ethi azofuna khona izimpendulo ukuthi kungani bengalutholi uxhaso ekubeni kuyibona abasebenzela umphakathi ekulwisaneni nezinkinga ezifana nezidakamizwa.
Omunye wezinhlangano ebezikhona uthe sebekhathele ukuxhashazwa ilomnyango. Uthe basanda kuthola ukuthi kunenhlangano egixabezwe ngezigidi zezimali njengoxhaso kodwa bona uma ngabe befaka izicelo abatholi lutho.
“Kungani lo mnyango ucindezela thina izinhlangano ezisemphakathini ezisebenza nomphakathi? Sikhathele sidiniwe. Lezi zinhlangano okuyizona ezigixabezwa ngezimali asikaze sizibone zisebenza emiphakathini. Sibekezele kwanele manje ezindaweni zasemalokishini,” kubeka yena.
Uqhube wathi bafuna ukuthi lolu daba lungenelelwe nanguMphathiswa wawo lo mnyango uNonhlanhla Khoza kanye noKlebe ukuze kuzophenywa ngalezi zinhlangano okuhleli kuthiwa zinikezwa uxhaso lwemali.
“Inhloko yalo mnyango iwukhanda limtshela okwakhe ayifuni kuzwa lutho kanti futhi sibona sengathi ayizimisele ukusebenzisana nathi ekulwisaneni nezinkinga ezibhekene nomphakathi.
“Sifuna ukuba nomhlangano noMphathiswa walomnyango ngoba sifuna indlela eya phambili ukuthi kuzosebenziswana kanjani.Sifuna ukuthi asiqokele inhloko yalo mnyango ezozimisela ngomsebenzi wayo ngisho kungathiwa uqoka yena lena ekhona asinankinga naye inqobo nje uma ngabe umsebenzi wenziwe ngendlela eyiyona.”
UMnu Vincent Myeni uthe uma kungukuthi izidingo zabo azihlangabezwa bazovala wonke amahhovisi alo mnyango bawenze ukuba kungasebenzeki kuwona.
“Sidelelekile siyizinhlangano ezisebenzela umphakathi kangangokuba sithe uma ngabe sibamba umhlangano nenhloko yaloMnyango wasitshela ukuthi ayikho into azoyikhuluma nathi, yena ukhuluma nezinhlangano ezixhaswe umnyango kuphela.
“Thina esiyizinhlangano eziphansi sibukeleka phansi.
Uma kungukuthi lolu daba alusukunyelwa sizoluqhuba luye phambili size sivale wonke amahhovisi omnyango kusona sonke isifundazwe. Lento ayiphelile namhlanje iyaqhubeka.”Imizamo yokuthola umnyango ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela....